ကလစ်တစ်ချက်လျှင်ငွေပေးချေမှုကိုနားလည်ခြင်းသည်သင်၏အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုကိုအထောက်အကူပြုသည် Martech Zone
စျေးဝယ်တဲ့ဂုရုများကသင့်ကိုနေ့တိုင်းသင့်ကိုတူးပေးတယ်။ သင်ကလစ်နှိပ်စရာမလိုပါဘူး။ မူရင်းဖြစ်၊ အကြောင်းအရာကောင်းများရေးပါ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်မျှဝေပါ - မှော်ဆန်ဆန်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်သင်၏တံခါးအောက်သို့ရောက်သွားလိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့လား။ ကျွန်ုပ်သည်ပရိသတ်ကိုဆက်လက်ပြောဆိုသည်မှာဘယ်သောအခါမျှမည်သည့်အခါကမျှမည်သည့်အခါမျှ၊ မည်သည့်အခါကမျှအချင်းချင်းအစာကျွေးမွေးနိုင်သည်၊ ဆက်လက်ကျင့်သုံးမည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် Search Engine Optimization နှင့် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက် Pay Per Click နှင့်နှစ်ခုစလုံးကိုအသုံးချရာတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်စုစည်းမှုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လာမည့် Podcast တခုကို ဝက်ဘ်ရေဒီယို၏ Edge Pay Per Click တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဤအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးသင့်သည်။
သော့ချက်စာလုံးများပြောင်းခြင်း - အကယ်၍ သင်သည်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်အကြောင်းအရာရေးသားရန်လမ်းကိုစတင်လိုက်ပါက၊ သင်ဘာအကြောင်းရေးသားမည်နည်း။ အများဆုံးအသွားအလာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုအကောင်းဆုံးသော့ချက်စာလုံးများဘာတွေလဲ? ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကစိတ်ကူးမရဘူး။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုသုတေသနလုပ်ပြီးစာရင်းပြုစုတယ်။ ထို့နောက်လပေါင်းများစွာသူတို့အသုံးအနှုန်းများအပေါ်အဆင့်အတန်းရရန်အရင်းအမြစ်များတန်ချိန်လျှောက်ထား။ ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့ရာထူးရကြလိမ့်မယ် ... ဘယ်သူမှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ site မှာဘယ်သူမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြောင်းရှာဖွေရန်။ ထိုအချိန်နှင့်ခွန်အားကိုအကြောင်းအရာနှင့်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်အစား၊ ၎င်းတို့သည်တစ်ချက်လျှင်လစာအနည်းငယ်နှင့်အကောင်းဆုံးကိုမည်သည့်အရာသို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုကြည့်ရန်အမှန်တကယ်သော့ချက်စကားလုံးပေါင်းစပ်မှုကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။ သင်ဘာကိုပြောင်းလဲသည်ကိုသင်သိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ရှာဖွေမှုအဆင့်ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ခဲတစ်ခဲလျှင်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုရေးသားဝေမျှခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ - အဓိကကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေဖူးပါသလား။ သူတို့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင်ကြော်ငြာတွေပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရတဲ့အခါသင်အံ့သြခဲ့ရတယ်။ အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုရှိသည်။ ပထမအချက်မှာသူတို့၏ပြိုင်ဘက်များသည်ထိုရလဒ်များကိုမယှဉ်ပြိုင်ပါ။ သို့သော်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းပြချက်မှာသင်သည်အလွန်မြင့်မားသောရာထူးနေရာတွင်ရှိနေသည့်တိုင် Search Engine Results Page (SERP) တွင်သင်၏ click-through နှုန်းကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမအဆင့်သင်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် click through rate (CTR) ကို ၅၀% တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ PPC ၏ကြော်ငြာသည် ၂ မှ ၄ အထိနှင့် CTR ကို ၈၂% တိုးနိုင်သည်။ ၅ အဆင့်အောက်တွင် CTR သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၉၆% တိုးတက်လိမ့်မည်။ !
Search Engine Land မှ - ဂူဂဲလ်သုတေသန - A # 1 အော်ဂဲနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိလျှင်တောင်မှ Paid Ads သည် ၅၀% ထပ်တိုးကလစ်များကိုပေးသည်:
ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်း - အသုံးပြုသူသည် SERP ကိုနှိပ်ပြီးသင်၏ဆိုက်သို့ရောက်သောအခါ၊ တိုက်ရိုက်အသွားအလာမှအပလခပေးသောရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းသည်အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးနှင့်အများဆုံးပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းရှိကြောင်းသင်ကောင်းစွာတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးပြီးသင်တပ်ဆင်ရမည် analytics စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုစီကိုစနစ်တကျမှန်မှန်ကန်ကန်လေ့လာပါ။ နောက်ကွယ်မှသီအိုရီသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများသည်ပြောင်းလဲရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သောအခါသူတို့သည် SERP ကိုတက်။ ထိပ်ဆုံးရလဒ်များကိုနှိပ်ပါ။
မည့် - PPC သည်သင်၏ SEO မဟာဗျူဟာထက်ကြီးမားသောအားသာချက်တစ်ခုမှာ remarketing ၏အားသာချက်ဖြစ်သည်။ Remarketing သည်သင့်ဆိုဒ်မှလာရောက်ကြည့်ရှုပြီး (၀ ယ်ယူခြင်းမရှိသော်လည်း) သင့်စိတ်ကြိုက်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်း (သို့) သီးသန့်ကမ်းလှမ်းခြင်းများပြုလုပ်သောသူများအတွက်ကြော်ငြာများကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဂူဂဲလ် Adwords ဖြင့်ရှာဖွေခြင်းနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ တတိယပါတီ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်များပင်လျှင်သင်၏ဆိုက်ကို visit ည့်သည်ရောက်လာပြီးထွက်ခွာပြီးနောက်သင်၏ကြော်ငြာကိုပြလိမ့်မည်။ အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုဖြင့်သင်ကဲ့သို့သောသူတစ် ဦး ဦး ကိုသင် လိုက်၍ မရနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အကျိုးရှိသည်။
ပေးဆောင်ရသောရှာဖွေမှုကိုမပယ်ပါနှင့်။ အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများလူကြိုက်များမှုမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှအပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ရန်မြှင့်တင်ရေးဘတ်ဂျက်များလိုအပ်သည်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ် ဦး ငှားရမ်းရန်ကျွန်ုပ်အားသင့်အားကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏ဘတ်ဂျက်သည်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ စားမိပါလိမ့်မည်။ ပေါင်းစပ်ထားသောတန်ချိန်ပေါင်းများစွာကိုစစ်ဆေးပါ၊ အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များကိုအသုံးချပါ၊ ခဲတစ်ခဲလျှင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်များပြားလှသောသင်၏ကုမ္ပဏီသို့ပြောင်းလဲရန်အော်ဂဲနစ်နည်းဗျူဟာများဖြင့်ပြောင်းလဲသောသော့ချက်စာလုံးများကိုလိုက်ဖမ်းပါ။ တစ်ချက်နှုန်းဖြင့်ငွေပေးခြင်းသည်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှု၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။
Tags: ကူးပြောင်းနှုန်းထားများသော့ချက်စာလုံးများကိုပြောင်းလဲဝဘ်ရေဒီယို၏အစွန်းသော့ချက်စာလုံးပြောင်းခြင်းအော်ဂဲနစ်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးကလစ်နှိပ်နှုန်းပေးဆောင်ppcမည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မြေserpserp ctrအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်